NIBBANA -3 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -32
ငယ် မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်အကြောင်း အနည်းငယ် ပြောကြည့်ချင်တယ်ဗျာ။
ငယ် တကယ့်မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဆိုတာ လောကုတ္တရာနဲ့ ယှဉ်တယ်။
နန်း ဒီတော့ !
ငယ် လောကုတ္တရာနဲ့ ယှဉ်တယ်ဆိုတော့ လောကီမှလွန်ရာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် ခဏခဏ ပြောနေတယ်။ အပျက်မှ လွန်ရာဖြစ်တယ်။
ငယ် အပျက်မှလွန်ရာဆိုတော့ ခန္ဓာမှ လွန်ရာဖြစ်တယ်။ စိတ်မှ လွန်ရာဖြစ်တယ်။
နန်း ဒါ့ကြောင့် !
ငယ် ဒါ့ကြောင့် ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုတယ်ဆိုလျှင် စိတ်ရှိတယ်လို့ မယူရဘူး၊ အသိရှိတယ်လို့ဘဲ ယူရမယ်။ အဲ့ဒါ ဖိုလ်ဉာဏ်ရဲ့ ထိုးထွင်းသိ၊ ရုပ်နာမ်ကို ရှုသတ်ပယ်ဖြတ် ပိုင်းခြားသိတဲ့အသိ၊ နိဗ္ဗာန်ကို အဲ့ဒီလို အသိမျိုးနဲ့မှ ထိုးထွင်းဆင်ခြင်လို့ သိနိုင်မယ်။ အဲ့ဒါကို မျက်မှောက်ပြုတယ်၊ ၀င်စားတယ်လို့ ခေါ်ရမယ်။
နန်း ဒီ့နောက်တော့ !
ငယ် ဒီနောက်တော့ ခန္ဓာအကြွင်းရှိတဲ့ နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်း စံဝင်ခြင်းဟာ သဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်နဲ့ ပတ်သတ်မယ်။ ခန္ဓာအကြွင်းအကျန်မရှိတော့တဲ့ ရဟန္တာများ ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းလောင်စာသိမ်းလို့ မီးငြိမ်းပြီး စံဝင်တဲ့ နိဗ္ဗာန်က အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်နဲ့ ပတ်သတ်မယ်။
ငယ် ခင်ဗျားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုလျှင် ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ ဒါ ကျွန်တော် မှန်းဆပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဆရာသမား အဆုံးအမနဲ့ အတိအကျ ပြောတာ။ ခိုင်မာတယ်။
နန်း ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားဆီကနေ ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေရတာ။
ငယ် ခိုင်မာဆို ဒါတွေက ကျွန်တော့်ဆရာဆီက တိုက်ရိုက်ရခဲ့တာ။ ဆရာက ကိုယ်တိုင်သိ၊ ကိုယ်တိုင်နားလည် တော်မူတဲ့ ဆရာသမားအမျိုးအစားဘဲ။
နန်း ကျေဇူးတင်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်သိတယ်၊ ယုံလည်းယုံတယ်၊ နောက်ထပ် ကျွန်တော့်ကို ဘာပြောပြနိုင် သေးလဲ ?
ငယ် တရားတကယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလျှင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောမယ်။
ငယ် တရားဆိုတာ ဘာလဲလို့ သိလာလျှင် တရားရဖို့ ကြိုးစားရမှာ နောက်မတွန့်ပါနဲ့လို့။
နန်း တရားဆိုတာဘာလဲလို့ ပြောပြ။ ခင်ဗျားနားလည်ထားတာ ပြောပြ။ နောက်မဆုတ်ဖို့က ကျွန်တော့်တာဝန်။
ငယ် တရားဆိုတာ ရုပ်နာမ်ဟာ ပျက်တယ်ဆိုတာဘဲ။
ငယ် အခုတော့ ဒါဘဲ၊ ခင်ဗျား နောက်မတွန့်နဲ့။
နန်း မတွန့်ပါဘူး။ ရုပ်ဟာ မမြဲဘူး၊ နာမ်ဟာ မမြဲဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော်လည်း နားလည်တာဘဲ။ ကျွန်တော့် အတိုင်းအတာနဲ့ ကျွန်တော်ပေါ့လေ။
ငယ် ခင်ဗျားသိထားတဲ့ အတိုင်းအတာထက် ပိုသိအောင် ပိုမိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိအောင် ကြိုးစားရမယ်။
နန်း ကြိုးစားမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်တာဝန်ထားလိုက်။
ငယ် ရုပ်နာမ်ဟာ ပျက်တယ်လို့ သိတာဘာလဲ။ သိလား ?
ငယ် အဲ့ဒါ ဉာဏ်ဘဲဗျ။ အဲ့ဒီဉာဏ် အားကောင်းလာလျှင် ကိုယ့်စိတ်ကို သူစိမ်းလို မြင်တယ်။
နန်း ငါ့စိတ်ရယ်လို့ မဟုတ်ဘူးပေ့ါ။
ငယ် ဘယ်ကလာဟုတ်ရမှာလဲ။ ဒါကိုဘဲ ဆင်ခြင်နေလျှင် တရားတိုးတက်နိုင်တယ်။ စိတ်ဟာ ငါမဟုတ်ဘူး။ ဒုက္ခလို့ —။ ပျက်သွားမှာဘဲလို့ —- ရှုမြင်နိုင်ရမယ်။
ငယ် ကောင်းရမယ်။ ဒါ တရားလက်တွေ့ကျင့်ဖို့ တရား ရိုးရိုးလေးနဲ့ အမှန်ကိုပေးထားတာ။
ငယ် ဒီလိုဆို တရားကို ဇွဲနဲ့ နှလုံးသွင်းဗျာ။
နန်း ဒါတော့ စိတ်ချပါ။ ကျွန်တော်က သေခြင်းတရားကို အောင်မြင်လိုသူပါ။
ငယ် ခင်ဗျားဆန္ဒကို ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီကိစ္စကိုတော့ လိုက်လုပ်ရမှာဘဲ။
နန်း လိုက်လုပ်ပါဗျာ။ လက်တွဲခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ရည်မှန်းချက်တူသူတွေဘဲဟာ။
ငယ် ခင်ဗျား တော်တော်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား။
နန်း ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ ပြောရမှာဘဲဗျာ။ ပြင်ဆင်ပြီးပြီလို့တော့ မပြောချင်ဘူး။
ငယ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ ပြင်ဆင်တယ်ဆို သာဓုခေါ်ရမှာဘဲ။ နေပါအုံး။ ခင်ဗျားက ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထား တာလဲ။
နန်း တိုက်ပွဲတိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ဗျာ။ သူလာလျှင် မပေးချင်တဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်တိုင်တိုက်ဖို့။
ငယ် ခင်ဗျားက သေမင်းကို ခန္ဓာပေးမယ်ပေါ့။
နန်း ပေးရမှာပေါ့ဗျ။ ဒါမှ သေခြင်းကို နိုင်မှာပေ့ါ။
ငယ် သေမင်းကို ခန္ဓာပေးရဲမှ သေခြင်းကို နိုင်မယ်ဆိုတာလေး ရှင်းစမ်းပါဦးဗျ။
နန်း လူတွေက သေခြင်းတရားလာလျှင် ကြောက်တတ်ကြလွန်းလို့ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပေးဖို့ထက်သန်စွာဘဲ ကြိုဆိုနေချင်တယ်။ ဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြင်ဆင်ချက်ဘဲ။
ငယ် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို သေမင်းလက် ပေးချင်နေအောင် ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့။
ငယ် ဒါမှ တကယ့်သူရဲကောင်းဘဲ။
နန်း ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပုံ နည်းစနစ်ကို ပြောတာနော်။
ငယ် ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီလိုကြိုးစားနေမှုကိုဘဲ ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူနေမိလို့ပါ။
ငယ် ရုပ်နာမ်ဟာ မကောင်းဘူးဆိုတာကိုတော့ သဘောတရားရေးရာအရ ကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါကြီးသေမင်းကို လက်ဆောင်ပေးအပ်ဖို့ ထက်သန်အောင် ကြိုးစားနေချက်ကိုတော့ ကျွန်တော့်အဖို့ အံ့သြ မိလို့ပါ။
နန်း မကောင်းဘူးဆိုမှတော့ ထက်သန်စွာ စွန့်ပယ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့ဗျာ။
ငယ် ကျွန်တော် ဒီနည်းစနစ်ကို မစဉ်းစားမိဘူးဗျာ။
နန်း သဘောတရားရေးရာအားဖြင့်တော့ မကောင်းဘူးဆိုမှတော့ ဘာလို့ဖက်တွယ်နေရမှာလဲဗျာ။ စွန့်ပစ်ဖို့ဘဲ ထက်သန်နေရမှာပေါ့။
ငယ် ဒီလိုရှုထောင့်၊ ဒီလိုအမြင်ကို ဆင်ခြင်မိအောင် သွန်သင်ပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဗျာ။
နန်း နှိပ်စက်တတ်တယ်လေ။ မှီလည်း မမှီခိုအပ်ဘူး။ ဒီတော့ သဘောတရားရေးရာအားဖြင့် စွန့်ပယ်ပစ်ရုံမျှသာ ဘဲပေါ့။
ငယ် ဘ၀င်ကျပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ သဘောတရားရေးရာအားဖြင့်ပေါ့။
နန်း သဘောတရားအမြင်မှန်မှ အကျင့်သန်တာဗျ။ အမြင်မှိန်လျှင် အကျင့်ပိန်တယ်။
ငယ် ကျေးဇူးဘဲဗျာ။ အခြားဘာတွေ ဘယ်လိုဆင်ခြင်စရာ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ လင်းပါဦး။
နန်း ဒီခန္ဓာကြီး — သေမင်းကို မြန်မြန်ပေးဖို့ ကိစ္စ မအောင်ခင်မှာ လူ့ကောင်းကြိုးလုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်ဘို့ ပဲပေ့ါဗျာ။
နန်း အမှန်အကန်ဘဲ။ ဒါနဲ့ — မေးရဦးမယ်။ ခင်ဗျားက ကမ္ဘာ့ဗဟုသုတရှိတော့၊ ကမ္ဘာရဲ့ အသိပညာရှာဖွေပုံ နည်းနိသျကို ပြောပြပါအုံး။
ငယ် သူတို့က အပြင်ကိုလိုက်တယ်လေ။ လောကကြီးကို လိုက်လေ့လာကြတယ်ပေါ့။
နန်း အော် — စကြ၀ဠာကြီးအထိပေ့ါ။
ငယ် ဟုတ်တယ်။ စကြ၀ဠာကြီးထဲက ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်း လေ့လာဖြေရှင်းချင်ကြတယ်။
နန်း ခင်ဗျားအမြင်က !
ငယ် ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ကျွန်တော်တို့က အတွင်းကို လိုက်တာဘဲ။ မတူကြဘူးပေါ့။
နန်း သူတို့က အပြင်ကိုလိုက်တော့ အပြင်ကိုသိကြတာပေ့ါနော်။ ပြင်ပကမ္ဘာကိုပေ့ါ။
ငယ် သိတာတော့ သိကြတယ်။ တော်တော်သိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နံပါတ်ကုန်တော့ မသိကြဘူး။
ငယ် နံပါတ်ကုန်သိဖို့ဆိုတာကတော့ လွယ်တာမှ မဟုတ်ဘဲဗျာ။
နန်း နံပါတ်ကုန်မသိတာကိုတော့ သူတို့သိကြလား။
နန်း ဒါဆို သူတို့ကိုယ်သူတို့ အသိပညာအရာမှာ ဘယ်ကျေနပ်နိုင်ကြပါမလဲ။
ငယ် ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆဲပဲလေ။ ဇွဲတော့ ကောင်းကြပုံရတယ်။
နန်း အနာဂါတ်မှာ ဒီထက်ပိုသိလာနိုင်ကြမလား။
ငယ် ပိုတော့ သိလာနိုင်ကြတယ်။ အဲ — တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဖျက်ဆီးမှု မလွန်ကဲကြလျှင်ပေ့ါလေ။
နန်း သူတို့နည်းကို ခင်ဗျားအားရသလား။
ငယ် သူတို့က အတွင်းမှ မကြည့်တတ်တာ။
နန်း အပြင်ကြည့်တော့ ဘာဖြစ်လဲ။ အတွင်းကြည့်တော့ ဘာဖြစ်လဲ။
ငယ် အတွင်းကြည့်တော့ အပြင်ကြည့်တဲ့ အသိကို ပြန်စစ်နိုင်တာပေါ့။
နန်း ဒီထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။
ငယ် ဟုတ်တယ်။ အတိုင်းမသိ ပိုမိုနက်ရှိုင်းတယ်။
နန်း ဒီနည်းစနစ်နှစ်ခုမှာ သော့ချက်ကဘာလဲ။
ငယ် သော့ချက်က သာသနာဘဲ။ အသိပညာရှာဖွေရာမှာ မြတ်စွာဘုရားက အထွတ်အထိပ်ဘဲ။ အသိဆုံး၊ အမြင်ဆုံးဘဲ၊ ဘုရားဟောတရားရမှ အသိပညာ အထွတ်အထိပ်ကို ရနိုင်မယ်။
ငယ် ခင်ဗျားရှင်းတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာမိတယ်ဗျာ။
နန်း ၀မ်းသာမိလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ရပ်ကို ပြောပြဗျာ။
ငယ် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ရပ်ကတော့ စိတ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်တည်ဆောက်ခြင်းဘဲ။
နန်း ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက စိတ်တို့၊ ရုပ်တို့ကို မြင်နိုင်တယ်နော်။
ငယ် ဟုတ်တယ်၊ မြင်နိုင်တယ်။
နန်း ရုပ်ထက် စိတ်က ပိုနုတယ်ပေါ့နော်။
ငယ် ရုပ်ထက် စိတ်က ပိုနုတယ်။ စိတ်ထက်ဉာဏ်က ပိုနုတယ်။ ဒါကြောင့် ဉာဏ်ကအားလုံးကို မြင်နိုင်တယ်။ ဓမ္မသဘာဝတရားများကို ဆိုပါတော့။
နန်း ဓမ္မသဘာဝ တရားဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ။
ငယ် သိပ်နုတဲ့ ဓာတ်သဘာဝလေးတွေကို ဆိုလိုချင်တာ။
နန်း အနုတကာ့ အနုညံ့ဆုံးထဲမှာ ဘယ်သူက အနုညံ့ဆုံးလဲဗျ။
ငယ် မြတ်စွာဘုရားပေါ့။ မြတ်စွာဘုရားက အနုညံ့ဆုံး၊ အသိမ်မွေ့ဆုံး၊ အနက်ရှိုင်းဆုံး၊ အကြီးကျယ်ဆုံး၊ အားအကောင်းဆုံး။
ငယ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ တန်ခိုးတော်တွေကို လူသာမန်တွေ မသိနိုင်ဘူး။
နန်း အံ့မဆုံးနိုင်ဖွယ် ကြည်ညိုရမှာပါဘဲဗျာ။
ငယ် တရားတော်ကလည်း အေးငြိမ်းမှုကို ဆောင်တယ်ဗျ။
နန်း ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး ကျင့်ကြံရပေမှာဘဲပေါ့ဗျာ။
ငယ် သံဃာတော် ဆိုတာကတော့ မြတ်စွာဘုရား သားတော်တွေဘဲလေ။
ငယ် ရတနာမြတ်သုံးပါးကို ကြည်ညိုတာဟာ ကောင်းသော ကြည်ညိုခြင်းပဲပေ့ါ။
နန်း ကျွန်တော် သဒ္ဓါတရား တိုးပွားမိပါတယ်။
ငယ် ဒီလိုဆို တစ်နေ့တစ်နေ့ ဆယ်ကြိမ်လောက် ရတနာမြတ်သုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားပြီး ကျေးဇူးတော်ကို ၀င်စားဗျာ။
နန်း အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အကြံပေးမှုဘဲဗျာ။ ကျွန်တော် ကြိုးစားလိုက်နာပါ့မယ်။
ငယ် လိုက်နာဗျာ။ ကျွန်တော့်ထံမှာ ရတနာမြတ်သုံးပါး ဆရာသမားရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေကို လှိုက်လှဲစွာ ပူဇော်အပ်ကြောင်း သတင်းကောင်း အချက်အလက်တွေ အများကြီး အခိုင်အမာ အထောက်အထားနဲ့ ရှိတယ်။
နန်း အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကို ကျွန်တော်တို့လည်း သိခွင့်ရှိသလောက် သိချင်လှပါတယ်ဗျာ။
ငယ် သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မကြာခဏဆိုသလို ကျွန်တော့်စာထဲမှာ ထည့်ထည့်ရေးလေ့ရှိပါတယ်။
နန်း ထူးခြားချက်လေးတွေ သိရချင်ပါတယ်။
ငယ် တရားတော်က စောင့်ရှောက်တယ်ဗျာ။ ထိရောက်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ဘဲ လိုတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အောင်မြင်တာတွေရှိတယ်ဆိုလျှင် အဲ့ဒါ တရားတော်က စောင့်ရှောက်လို့ပါ။
နန်း ခင်ဗျားရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ မသေးပါဘူး။
ငယ် အဲ့ဒီလိုယူဆလျှင် အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာ တရားတော်ရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုဘဲဗျ။ ကျွန်တော်က ဆရာသမားနဲ့ တရားတော်ကို သိပ်ယုံကြည်၊ ကြည်ညိုတာ။
နန်း ကျွန်တော်လည်း ရိပ်စားမိပါတယ်။
ငယ် ကျွန်တော့်ဘ၀ကနေ ဆရာသမားနဲ့ တရားတော်ကို နှုတ်လိုက်လျှင် `ဇီးရိုး´ (သုည) ဘဲကျန်မယ်လို့ ကျွန်တော်မကြာခဏ ပြောပြဘူးပါတယ်။ အဲ့ဒါ အမှန်ပါ။
နန်း ဟုတ်ပေမှာဘဲဗျာ။ ဒီတော့ ခင်ဗျားရဲ့ဘ၀မှာ ဆရာသမားနဲ့ တရားတော်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ အောင်မြင်မှု တစ်ခုကိုတော့ ဖွင့်ပြောပြဗျာ။
ငယ် ဖွင့်ဟလို့ ပြောပြရမယ်ဆိုလျှင် ဆရာပြောပြတဲ့ တရားတော်ကြောင့် ကျွန်တော်က နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် သိနားလည်လိုက်တယ်ဗျာ။ အဲ့ဒါ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဘဲ။ ဘယ်သူမှ ကျွန်တော့်ကို နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလွဲမှားစွာ ပြောလို့မရတော့ဘူး။ နားမ၀င်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီလောက် သေချာအောင် အသွန်အသင်ခံခဲ့ရတာ။
နန်း ကြိုက်တယ်ဗျာ။ သာဓုလည်းခေါ်ပါတယ်။
ငယ် ဒါက ခင်ဗျားကိစ္စပါ။ ကျွန်တော်က အမှန်အကန် ပြောပြဖို့ တာဝန်ယူတာတစ်ခုပါဘဲ။
ငယ် ကျေနပ်တယ်ဆိုလျှင် ခင်ဗျားဒီဘ၀ တရားရလျှင်ပြီးရောလို့ ဆန္ဒပြုနိုင်သလား။
ငယ် အော် – ခင်ဗျားအသက်ရှင်နေရတာ ဘာမှမရချင်နေ တရားရလျှင်ပြီးရောလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သလားလို့ မေးတာပါ။ ချမ်းသာမှလား? ဂုဏ်ရှိမှလား? နာမည်ကြီးမှလား? ဘာမှ မရချင်နေ၊ တရားရလျှင် ပြီးရောလားလို့ မေးတာပါ။
နန်း မေးခွန်းက ကောင်းလွန်းနေတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် စဉ်းစဉ်းစားစား ဖြေပါရစေ။
ငယ် ဖြေပါ။ စဉ်းစဉ်းစားစား ဖြေပါ။
နန်း ကျွန်တော့်မှာ အထိုက်အလျောက်၊ နာမည်တစ်လုံး ရနေပြီဆိုလျှင်ရော။ ဥပမာပြောတာ။ ရပြီးသား ရှိပြီးသားလေးတွေက ရှိနေနှင့်ပြီးလျှင်ရောလို့ ဆိုလိုတာပါ။
ငယ် ရပြီးသားကို မရရဘူးလို့ မဆိုလိုဘူးလေ။ နောက်ထပ် ဘာနဲ့မှ လဲမယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သဘော။ ဥပမာ – တရားတော့ ရချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂုဏ်မရရှိမှာစိုးလို့ တရားရလည်း မယူတော့ဘူးဆိုတာမျိုး၊ တရားနဲ့ တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်လာလျှင် တရားကို အနိုင်ပေးရဲရဲ့လားလို့။
နန်း အော် – ပေါက်ပြီ။ သဘောပေါက်ပြီ။ ခင်ဗျားလုပ်ခဲ့သလို ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက်ဆိုလဲ ဖျက်ခဲ့တဲ့ သဘော။
ငယ် ဟုတ်ပါပြီ ထားပါ။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကို စံနမူနာထားပါလို့ ဆိုလိုနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
နန်း ကျွန်တော် နားလည်ပါပြီ။ ကျွန်တော် တရားရဘို့ကို ဦးစားပေးပါ့မယ်။ ဒီစကားဟာ သစ္စာဆိုတဲ့ စကား အမျိုးအစားပါ။ ခင်ဗျားကို သက်သေတည်ပြီး ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရားရဖို့ဟာ အခြားအရာရာတွေ ရဖို့ထက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်း သိနားလည်ပါပြီ။ ဒီတော့ နောင်တစ်စုံတစ်ရာ ကြုံကြိုက် တိုက်ဆိုင်လို့ တရားရခြင်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ်လာလျှင် တရားရဘို့ဘက်မှာဘဲ မားမားမတ်မတ် ပြတ်ပြတ်သားသား ရင်ကော့ပြီးတည်ပါ့မယ်။ ရဲဝံ့စွာဆိုတဲ့ သစ္စာစကားပါဘဲ။
ငယ် သာဓုပါဗျာ။ ဒီခံယူချက်ဟာ အမှန်အကန်ပါဘဲ။ တစ်သံသရာလုံးက ကပ်ပါလာတဲ့ အငြိအစွဲတွေကို ဖြတ်ပယ်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံဇွဲနဲ့တော့ ဘယ်လွယ်စကောင်းပါ့မလဲ။
နန်း ဇွဲဟာ အမှတ်တစ်မှတ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သဘောပေါက်ပါတယ်။
ငယ် ဒီလိုဆို နောက်အမှတ်ကလေးတွေ မှတ်လိုက်ဦးဗျာ။
တစ် – ကိလေသာကို အကြောင်းမပြုနဲ့။
နှစ် – အနေမှန်ရမယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာထိန်းရမယ်ပေ့ါ။
နန်း ကောင်းပါပြီဗျာ။ နောက်နှစ်ချက်ကိုလည်း သတိရှိပါ့မယ်လို့ ကတိက၀တ် ပြုပါတယ်။
ငယ် သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ သာဓု – သာဓု – သာဓု။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, သဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်, သာသနာ, အတ္တ, အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်, လောကီ, မြတ်စွာဘုရား
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, သဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်, သာသနာ, အတ္တ, အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်, လောကီ, မြတ်စွာဘုရား. Bookmark the permalink.